Kutub Karintii Kurtun kakanay Noqotoo la kari waa! – Bashiir M. Xersi
Kutub Karintii Kurtun kakanay Noqotoo la kari waa!
Posted on 12 Jun 2013 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Kali talinimadii Waddanka lagu soo koobay, kulaylkii ka laga qaaday waxaa ka abuurmay kooxihii hubaysnaa (Jabhadihii), waxaa ka dhashay rididdii Kacaanka iyo kala dirkii Dawladdii dhexe ee Soomaaliyeed, waxaa xigay halaaggii kooxihii hubaysnaa, ee ku loolamayey talada cidda qabanaysa, waxay u sii kala bexeen toboneeyo kooxood, waxaa hal abuurmay erayada: HOGAAMIYE-KOOXEED, iyo QABQABLE, silic dilyeynta ay Bulshada ku hayeen wax ka damqada la waa! Sida Libaax neef dishay ee raqdii dul mowriira oo kale, xaalka oo sidaa ah waxaa soo xoogaystay Maxkamadihii, oo markii hore howshoodu eheed kuna koobned dhaqan celinta Mooryaanta Beesha iyo wixii loo keensado ee kale.
Waxaa foodda is daray Maxkamadihii iyo Qabqablayaashii, waxaa daaqadda laga saaray Hogaamiye-xookeedyadii, waxay eheed guul lagu diirsaday, neecaaw qabow iyo saxansaxo udgoon badan, jabkoodii wuxuuse keenay hoog hor leh oo Soomaalida u billowday iyo halaag aan meel uu ku dhammaanayo iyo meel ku socda la garanayn! Waxaa billaabatay Marxalad lagu tilmaami karo:MARXALADDA KUTUB KARINTA! Waxaa dalkii gees-ka-gees qabsaday wadaaddo ku koodaya Aayado laga soo kalluumaystay Kitaabka! Waxaa Dadkii ku faafay: KUB FAYDAN, KUTUB AFDUUBAN, KARIN MADAW oo CALANKII lagu badalay!
Marxaladda Kutub karinta waxaa soo if baxay Mooryaan Diimeed Diintii abduubtay, waxay Bulshada kula keceen wax aan la maqal oon la arag. Waxay ku dhaqaaqeen falal aad u fool xun oo Soomaali fir u lahayn, waxay ka sii dareen oo ka sii dhib badiyeen Qabqablayaashii, xaalna wuxu noqday: “KA DAR OO DIBI DHAL, iyo MEESHI CIR LAGA SUGAAYEY AYAA CEYRYAAMO KA TIMID!”
Marxaladda Kutub karinta waxaa la howl galay Mooryaan aan waxna ka xishoonayn, waxaa la mamnuucay wax walba, waxaa la joojiyey oo albaabada la isgu dhuftay goobihii ganacsiga, waxaa la xiray xarumihii footooyinka sawirrada, waxaa la diiday daawashada Filimmada, waxaana la joojiyey Siyaarooyinka lagu tagi jiray qabuuraha qaarkood, iskaba daaye, waxaa la burburiyey oo dhulka lala simay qabuura dhowr ah, waxaa la beegsaday qalinkii iyo Afmaalkii, waxaa hanjabaadyo loo qaybshay qof walba oo soo bandhiga aragti ka duwan tooda.
Marxaladda Kutub karinta in kasta oo ay wali socoto oo aysan dhammaan ama aan la soo af jarin aysanna ka mid noqon tagatada iyo Sooyaalka, haddana, waxaa muuqata in Kitaabkii adkaaday oo la karin waayey, waxaa taas daliil cad u ah maqaawiirtii shalay ku jirtay Jikada ee ku howlneed Kutub karinta waxay u kala baxeen inta muuqata ilaa 4 qaybood oo kala ah:
– kooxda ku bahoobay Dawladda Minimo (qabyo) Qaran, ee uu hoggaamiyo Shariif, waxaana ugu cad cad kooxdaan: Janaqow, Prof Caddow, IQB.
– Kooda Alshabaab: waa kooxda ugu Kutub karinta badan, waxaa ugu caansan Roobow iyo Saxan Turki.
– Kooxda Xizbul Islaam: waxay kaalinta labaad kaga jiraan Kutub karinta, oo waxay ku xigaan Alshabaab, waxaana ugu caansan Xasan Daahir Aways iyo Imaam.
– Kooxdaan ugu dambaysa waa qayb aan Bulshada ka dhex muuqan, balse, laab la kicii Kutub karinti ku soo hungoobay, oo iska gaabsaday waxaana laga yaabaa inaysan sidaa u sii badnayn.
Haddaba, haddii Kutub karintii lagu kala tagay, maadama aysan karintiisa si rasmi ah u hirgalin markii horaba, ee markii qoryihii la soo ururshay oo dabkii lagu dhajiyey Qaacii ka baxay iyo Uuradii cirka isku shareertay uu qof walbaa Qaacu Afka iyo Sanka ka galay Qufac iyo Riiraxyo dhinac ula jeestay, ayna u sii dheertahay in markii Qaacu Indhaha ka galay uu isagoon qummaati wax ugu jeedin ambaday, isagoon garanayn meel uu ku wajahan yahay iyo qod uu ku socda toona!
Xaabadii la soo guray iyo Qoryihii la soo ururshay dhardhaartii la qotimayey, dabkii lagu shiday markii la afuufay oo uu baxshay birir yar waxaa durbadiiba la saaray Kitaabkii, Maadaama kariyayaashii ay la soo gudboonaatay xaalad adag, oo ka dhalatay Qaac Sanka, Afka iyo Indhaha ka galay, oo ay kala firdhadeen, Kitaabkiina wax Walaaqaya ama qof wax u baahan yahay ku shubaya aysan jirin sida: Biyo, Sokor, Cusbo, iyo Iidaan kale, waxaa Kitaabkii ku dhacay in ugu horrayn uu dabkii ka leefay Waraaqihii ay ku qornaayeen Xarfaha, erayada, Shaqallada, iyo Weedhaha, waxaa soo haray oo kaliya erayadii Shaqalladii iyo Weedhihii oo qura, micnaha, wax qoran oo aan waqrad ku qornayn! Kaana waxaa aqrin kara Caalin Hor bannaan ah oo kaliya.
Kutubkii wuxuu ku basbeelay dabkii, balse, loo dhawaan waa, oo waa la karin waayey, sababto ah, wuxuu noqday mid aad u kakan oo uusan waxba ka dhibayn ama ka tarayn dabka dhagar wadayaasha, kakanaanta Kitaabka iyo inuu dabkii ku dhiirran waayey inuu shiilo waxay muujinaysaa in Mooryaan Diimeedkuna iska dhammaan doonaan, waxa harayana ay tahay Runta, Xaqa, iyo dhabta.
Ugu dambayn, fadlan Umadda Soomman u naxariista oo ka daaya dagaalka, ugu yaraan ha idinka nastaan bishaan, waa haddaad xibin damqata aad leedihiin.
Shiikh Shariif ma Shalay buu Saxnaa mise Maanta ayuu Sheedda ka weecday?!